Jaangooyada iyo Siyaasadaha-G XIRANKA XIDHIIDHKA G
Hoyga>Nagu saabsan>Heerka iyo Siyaasadaha
Dhaqdhaqaaq xoog leh had iyo jeer wuxuu ka yimaadaa udub dhexaad xoog leh.
Sunsoul firfircoon iyo tilmaamaha shirkadaha wax ku oolka ah ayaa saldhig u ah koritaanka degdegga ah ee shirkadda. Shaqada adag iyo dadaalka shaqaalaha Sunsoul sanado badan ayaa lagu soo koobi karaa shan heerar shirkadeed oo hoos ku taxan, kuwaas oo gacan ka gaystay kor u qaadida koboca shirkada ee dhinacyada kala duwan sida cilmi baarista iyo horumarka, qiyamka, faa'iidooyinka iskaashiga, koritaanka shaqaalaha iyo shirkadaha masuuliyada.
• In La Kordhiyo Tartanka Macaamiisha
Macaamiisha ayaa ah furaha guusheena. Waxaan la wadaagnaa khibradaheena macaamiisheena waxaanna siineynaa xalal dhameystiran si ay ugu gaaraan ujeedooyinkooda si hufan oo wax ku ool ah.
Hal-abuurnimadu waxay u horseeddaa mustaqbal
Hal-abuurnimadu waa halbowlaha nolosha. Waxaan ku guuleysaneynaa inaan riyada u rogo tiknoolajiyada iyo wax soo saarka. Geedkeenna goynta ahi waa hal-abuur iyo waaya-aragnimo.
• In La Kordhiyo Qiimaha Shirkadda
Waxaan soo saarnaa kobcin faa'iido leh si loo hubiyo guul waara iyadoo laga faa'iideysanayo fekerkeena ganacsi ee isku dheelitiran. Waxaan ku dadaalnaa dhammaystirnaan, waxaanna ku dadaalnaa heer sare.
• Xaqiiji Riyada Shaqaalaha
Shaqaalaha heer sare waa aasaaska guusha shirkadeena. Dhaqanka shirkadeena waxaa lagu gartaa adkeysi, hufnaan iyo is ixtiraam. Waxaan ku dhiiri galinaynaa shaqaalaheena inay wax isla lahaadaan oo ay isla koraan shirkada.
• Soo Dhowrso Mas'uuliyadda Bulshada
Waxaan ku hawlan nahay dhiirrigelinta geeddi-socodka horumarinta bulshada iyada oo loo marayo hagaajin, soo-jeedin iyo teknoolojiyad cusub. Waxaa naga go'an qiyamka guud, dhalashada shirkadaha wanaagsan iyo jawi caafimaad qaba. Daacadnimadu waxay hagaysaa dhaqankeena ku wajahan shaqaalaheena, shuraakadayada ganacsiga iyo saamileyda.
Siyaasadda Tayada assion Jacaylka Sare
• Dulqaad la'aanta cilladaha
Hawlaheena waxaa loogu talagalay dhanka adag ee looga hortagayo wax kasta oo ku fashilmay alaabteena iyo geeddi-socodkeena. Waxaan u tixgelineynaa Ciladaha Zero sida hadaf macquul ah. Waxaan taageernaa hagaajinta nidaamsan ee alaabada iyo howlaha.
• Qancitaanka Macaamiisha
Hawlaheena ayaa ah kuwa macaamiisha diirada saaraya waxaana naga go'an inaan horumarinno iskaashi guuleysta bilowga, laga bilaabo adeegsiga mashruuca wax ku oolka ah iyo maaraynta wax soo saarka ilaa mugga bixinta, dhamaan meertada nolosha.
• Hormarin joogto ah
Mabda 'u ganacsigayagu waa inaan si isdaba joog ah u hagaajinno tartankeenna. Haysashada falanqaynta asalka-sababta oo qoto dheer iyadoo la adeegsanayo PDCA iyo aaladda Six Sigma oo tayo sare leh, si dhakhso ah oo nidaamsan u hagaajinta wax soo saarka iyo geeddi-socodka, wadaagga hababka ugu fiican iyo waliba hal-abuurnimadu waa aasaaska kor u qaadista tayada iyo wax soo saarka.
• Ruux Ganacsi, Awoodsiin & Ka Qaybgal
• Waxaan ku dhiirigalinaynaa ruuxda ganacsiga, awoodsiinta iyo kaqeybgalka shaqaalaheena iyadoo si isdabajoog ah oo nidaamsan loo hormarinayo loona adeegsanayo aqoontooda, khibradooda iyo xirfadahooda.
• Siyaasadda Deegaanka, Caafimaadka Shaqada iyo Amniga
• Waxaan mas'uul ka nahay balanqaadkeena jawi saaxiibtinimo, u hogaansanaanta sharciga iyo shuruudaha kale, iyo sidoo kale abuurista goob amaan ah oo caafimaad leh dhamaan shaqaalaha markasta.
• Kor u qaadista wacyiga shaqaalaha ee amniga iyo caafimaadka, waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan shaqaalaha inay kaqeybqaataan howlaha la xiriira amniga iyo barashada caafimaadka.
• Waxaan qiimeyneynaa saameynta deegaanka ee suurtogalka ah ee heerarka hore ee wax soo saarka iyo horumarka geeddi-socodka. Hadafkeenu waa inaan ka hortagno ama yareyno wasakheynta.
• Waxaan sidoo kale yareyneynaa wasakhda jirtey iyo soo saarista wasakheynta habka wax soo saarka, iyada oo loo marayo horumarin joogto ah oo dhammaan shaqaaluhu ku hawlan yihiin.
• In aan damaanad qaadno jawi shaqo oo aamin ah, caafimaad qaba oo la isku halleyn karo waa qayb ka mid ah mas'uuliyaddayada bulshada.